Labo arrimood oo aadan uga hagran waxa aad hayso dadka wax yeeloobay
By ibrahim Aden shire October 18, 2017
Musabadii nagu habsatay Sabtidii waxay abuurtay baahi balaaran oo dhinacyo badan leh. Gurmadka loo fidiyay dhibbanayaasha iyo eheladooda ayaa wali socdo. Wax qabadka la wado waxaa ka mid ah tabaruucaad loo aruurinayo dadka wax yeeloobay oo ka socdo meel walba oo dad soomaaliyeed joogaan. Anigoo og in dadkeennu hagar la'aan wax u bixinayaan ayaan, hadana, rabaa inaan sii dhiiri galiyo si aysan u noogin.
Labo xalaadood midkood unbaad ku sugantahay oo aan mid sadexaad lahayn. 1) inaad haysato wax kuu kala haro oo haddi aad qayb bixiso qayb kusoo harayso. 2) inaad haysato waxa markaas gacantaada ku jiro oo haddii aad dhiibto waxbo kaaga danbayn. kii aad tahayba bixi oo waxba ha hagrin labo arrimood dartood.
Haddi aa tahay kan hore ogow waxa aad bixisay waa qashin iyo wasaq aad ka fogaysay naftaada, reerkaada iyo maalkaada. Qashin qofkii kaa fogeeyo mahadnaq ayuu mudan yahaye ma mudna manno sheegasho. Inay sadaqadu wasaq tahay waxaa noo sheegay Suubanaha SCW waana sababta loogu diiday in Suubanaha SCW iyo qoyskiisaba ay qaataan sadaqadu. Sidaa darteed naftaada u sheeg in waxa aad bixinayso ay tahay wasaq aad iska fogaysay oo waliba si bilaash ah lagaaga qaaday qofka qaadayna adiga mahadnaq kugu leeyahay, intaasna ay kuu sii dheertahay in abaal gud weyn laguugu dari doono goor danbe ama goor dhow. Haddii aad intaan naftaada ka raariddo culays danbe kugu qaban mayso waxaad bixinayso.
Haddii aad ku sugan tahay xaaladda danbe oo hal shilin aad ka naxdo waa inaadan ka harin gurmadka oo aad bixiso halka shilin ee aad hayso waayo waxaa laga yaabaa in waxa kaa hortaagan taajirnimada uu yahay shilinka faraqa kuugu guntan ee laga fujin la'yahay. Si dhug leh u akhri qisadaan si aad u fahanto waxaa aan tilmaamayo.
Waxaa Siiriya ka soo socdaalay Cubaydullahi Ibnu Cabbaas Ibnu Cabdi-Mudalib oo uu la socdo khaadin kiisa ah. Goor ay meel duur ah marayaan habaynkiina dumay ayaa roob qabtay maryihiina ka qooyay maadama aysan haysan meel ay ka jirsadaan. Iyagoo naftu hayso qabow dartii ayay arkeen dab meel ka baxayo waana kusoo leexdeen.
Dabku wuxuu u shidanyahay oday ay la socdaan haweenay u hayso wiil yar. Hooyadu gaajada iyo faqriga dartii naaskeedu caano ma leh sidaa darteed waxay wataan ri' irmaan oo ay wiilka u listaan. Cubaydullahi iyo kaahdimkiisi salaan ka dib dabki ayay dhinac ka kulaaxeen. Odaygii ayaa kacay oo aaday docdii ridu ku xirnayd. Islaanti oo dareentay inuu rida gowrici rabo ayaa ka daba kacday kuna tiri markii uu ridi soo qabtay, war ma waatay maxaa canuga la siin haddii aad rida gowracdo? Wuxuu yiri intii marti igu ak bakhtin lahayd wiilkaygu gaajo ha u dhinto.
Marki waagi baryay ayuu Cubaydullahi oo xalay hilib ka dhargay eeg-eegay agagaarka qoyska si uu u arko xoolaha xalay laga nooleeyay mise wax noolba sadexdaan qof ayaa meesha ka joogo. ma leh xoolo dhaqaaqayo iyo raadkood toona. Wuxuu xaqiiqsaday in reerku ridaas ka naxay. Wuxuu ku joostay khaadinki oo ku yiri maxaad lacag noo haysaa. Khaadimki ayaa ku jawaabay shan boqol oo dirham. wuxuu ku yiri sii reerka. Khaadimki ayaa yiri ma walaatay, ninkaan reer miyiga ah waxaa ku filan shan dirham oo kaliya, haddii aad u roonatana boqol ooga dhig ee xageed u siinaysaa waxaan oo maal ah. wuxuu ku jawaabay ninki xalay noo qalay halki neef ee uu xoolo ka lahaa sideen waxaan yar ee aan gacanta ku sito ooga kala reebtaa anigoo xoolo badan meelo kale ii yaalaan.
Sidaas ayay odaygii qoraxdu u dhacday isagoo hal neef leh, waaguna u baryay isagoon waxbo lahayn u hergalsaday isagoo ka mid ah taajiriinta dhulki uu ku noolaa. Malaha qaninimada waxaa ka hortaagnaa ridaas oo laga yaabo inuu muddo ilaalin jiray. Waxaa laga yaabaa inuu shaydaan ku yiraahdo ninkaasu nin wax wato ayuu wax siiyay. Labo shay maskaxdaada gali. kow, cidda wax bixisay waa Eebe waayo haddusan Eebe ku hanuunin in Cubaydullahi reerka daymoodo, horay ayuu isaga kallihi lahaa isagoon shilin dhiibin. Labo, Qasab maahan in qofki aad wax siisay laguu soo mariyo waxa Eebe kula doono ee siyaabo kale ayaa laguu dharjin. Si la mid ah ridaas ayaa laga yaabaa in waxa yar ee aad ku dhagantahay kaa hortaagantahay inaad ka baxdo faqriga ee dhiib waxa aad hayso.
Waxaan kusoo koobayaa maanta lama joogo maalin la kala haro. waxaa dhintay hooyooyin haystay caruur aan cid kale haysan. waxaa dhintay wiilal iyo gabdho reero biilka usoo saari jiray, waxaa dhaawac ah dad tiro dhaafay oo aan cid awood u leh aysan jirin caawintooda sidaa awgeed qof walbow bixi waxaad hayso.